ဇူလိုင်လ 'စိတ်ကူးအိပ်မက်များ တကယ်ဖြစ်လာပြီ' ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကံထူးရှင် ပေါ်ထွက်လာပါပြီ!
ယခုလ ကံထူးရှင် မစ္စ Sureerut Haritawen မှ FBSကို သူမ၏ ထိမိစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် စိတ်ကူး - သူမကလေးနှစ်ဦးအတွက် ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများအကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မသိသလို မနေနိုင်ခဲ့ပါဘူး!
မစ္စ Sureerut Haritawen သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Nakhon Pathomတွင်နေထိုင်ပြီး၊ အိမ်အကူအဖြစ်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ သူမကလေးနှစ်ယောက်အတွက် ကျောင်းသွားချိန်တန်ပေမယ့် ကျောင်းသုံးပစ္စည်းအားလုံးကို တတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အရမ်းစိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် FBS "စိတ်ကူးအိပ်မက်များ တကယ်ဖြစ်လာပြီ" ပြိုင်ပွဲအကြောင်း ရှာတွေ့တဲ့အခါ၊ ဘာတောင်းဆိုရမလဲ ချက်ချင်းသိခဲ့ပါတယ် - ပြီးတော့ သူမအကူညီတောင်းတာကို ကျွန်တော်တို့ မသိသလိုမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူး! ကျွန်တော်တို့ Facebook စာမျက်နှာမှာ သူမမှတ်ချက်တွေ ထားခဲ့တာနဲ့တပြိုင်နက်၊ ကျွန်တော်တို့ ထိုင်းရုံးမှ သူမကလေးတွေစိတ်ကူးထားတဲ့ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများနဲ့ သူမအိမ်တံခါးရှေ့အရောက်သွားခဲ့ပါတယ်! မျက်ရည်မဆည်နိုင်အောင် ကလေးအမေလေးဟာ အရမ်းပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။
မစ္စ Sureerut Haritawenက ပညာရေးနှင့် ကျောင်းသည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ယုံကြည်ပါတယ်။ "ကျွန်မမှာ မိသားစုကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေအတွက် ငွေများများစားစားမရှိပါဘူး - ခုတော့ ကလေးတွေကျောင်းသွားနိုင်ပြီ၊ ဒီအတွက်လည်း FBSကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟု - သူမပြောခဲ့ပါတယ်!"
သူမသည် ယခင်က မရောင်းဝယ်ဖူးသော်လည်း၊ အရောင်းအဝယ်သည် အပိုဝင်ငွေရရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်၊ လေ့လာမှုလည်း အတော်လိုမည်ဟု မစ္စ Sureerut Haritawen မှတွေးတောခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မစ္စ Sureerut Haritawen နှင့် သူမ၏ ကလေးများအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပြီး၊ သူတို့အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်!